Oromoo: 'Ummanni Irreecha akka ijasaatti eeggachuu qabu'- BATO - BBC News Afaan Oromoo
Oromoo: 'Ummanni Irreecha akka ijasaatti eeggachuu qabu'- BATO
1 Onkololeessa 2020
Irreecha Onkoloolessa 3 fi 4 magaalaa Finfinneefi Bishooftuutti kabajamuuf jirurratti yaada BBCf kennaniin Itti-gaafatamaan Biiroo Aadaafi Turiizimiif Oromiyaa (BATO) Obbo Kabbadaa Deesisaa uummanni Oromoo Ayyaanicha akka ijasaatti eeggachuu qaba jedhan.
"Oromoon kan kaleessa sirni nama nyaataa harka balleessaa ture har’ammoo harkumasaatiin akka of-harkaa hin balleessine kunuufachuu qaba," jedhan.
Ayyaanni mallattoo nageenyaafi tokkumama ta’e kun kan Oromoon bara hedduuf eegee asiin ga’e ta'uu kan dubbatan Obbo Kabbadaan, duudhaasaa qofa eegee akka kabajamuuf hunduu hojjechuu feesisa jedhan.
Ergama adda addaa kan qabaniin ajandaan garaagaraa waamamuu akka hin qabne, namni Oromoofin quuqama jedhu hunduu karaa nagaafi duudhaa ganamaa eegeen akka kabajuuf dhaamsa dabarsaniiru aanga'aan kun.
Itti-gaafatamaan kun mootummaan Federaalaafi Oromiyaa haalaan qindaa'anii karaa nagaafi milkaa'aa ta'een akka kabajamuuf hojjechaa jiru jedhaniiru.
Akka Obbo Kabbadaan jedhanitti, Irreecha kanaan dura, keessattuu bara darbe kan magaalaa Finfinneetti kabajames haa ta’u kan Bishooftuu, foolleewwan heddumminaan ramadamuun nageenyaa uummataa kabachiisuurratti hojjechaa turan.
Akka magaalaa Finfinneetti foolleewwan kuma 20 ta’an Irreechaaf bara darbe ramadamanii akka turan abbootiin gadaas ibsanii turan.
Foolleewwan hawaasa irreechaaf ba’etti dhiyaachuun sakatta’insa gaggeessuun iddoo Irreechaatti nageenyi waaraa akka dhufuuf ga’ee olaanaa gumaacheera jedhu namoonnis.
Baranahoo ga’een foollee akkami, moo qaamolee nageenyaa qofatu nageenya eega isa jedhamanii gaafatamaniif Obbo Kabbadaan akkas jedhan, ’’Bara kamiyyu qaamni nageenyaa biraa hafee hin beeku. Foolleen qaamolee nageenyaa deggeruun namoota karaa qajeelchaa turan.
Magaalaa Finfinnee kana keessatti foollee qofaan nageenya eegsisuun hin danda’amu,’’ jedhan.
Magaalaa Finfinnee keessa qaamni fedhii adda addaa qabu kan muuxannoo qabuufi maallaqi ramadameefii hojjetu jira kan jedhan Obbo Kabbadaan, kun qaama leenji’ee ogummaa qabuun eegamuu qaba jedhan.
‘’Qaamoleen hookkara uumuun uummata walitti buusuuf socho’an magaalaa kana keessa jiraachuu qaamni nageenyaa adda baaseera.
Maallaqi guddaan kaffalameefii hojjechaa jiru. Kana to’achuuf qaama nageenyaa ogummaa qabutu barbaachisa. Foolleen akka duudhaa Irreechaatti ni hirmaata, garuu hojiin nageenya eegsisuu abbummaadhaan kan qaamolee nageenyaati.’’
Lakkoofsi nama hirmaatuu akka duraanii miliyoonotaan waan hin taaneef haga kana uummata karaa qabsiisuufi sakatta’uudhaaf hojii guddaan hin jiraatu jedhan.
'Lakkofsa irreeffattootaa daangessuun Oromoo malkaarraa ugguruun safuudha'
Lakkoofsa namoota hirmaataniin walqabatee komiin erga dhagahamuu eegalee bubbuleera. Kanarratti kan gaafataman Obbo Kabbadaan, Irreecharratti namoonni hirmaatan kan ayyanota kaanii gadi hin ta’u jedhan.
‘’Lakoofsi namoota hirmaatanii kan abbootiin Gadaa murteessaniidha. Inumaa kan isaan murteessanirra daballeerra nuti. Odaa salgan irraayyuu namni akka hirmaatu nutti himaniiru. Kumaatamaan namni ni hirmata,’’ jedhan.
Uummanni Oromoos uummata duudhaa beeku, uummata abbaa Gadaasaa dhagahu waan ta’eef ajaja darbe qalbeeffatanii hojiirra oolchu jennee abdanna jedhan.
Namoonni heddumminaan ni argamu jedhanii akka hin tilmaamnes ibsan.
Gabaasa Huuman Raayitis Waach (HRW) rratti maal jedhu?
Gabaasa dhaabi mirga namoomaaf falmu Huuman Raayitis Waach (HRW) humnoonni nageenyaa obsaafi of-qusaannaa guddaa gochuu qabu jechuun baase akkamiin ilaaltan jennee isa gaafanneefis, nageenya lammiilee keenyaa kan eegnu qaama biraan ajajamnee osoo hin taane dirqama waan qabnuuf jedhan.
Nageenyi qaamolee nageenyaa qofaan hin mirkanaa’u kan jedhan Obbo Kabbadaan, namni Oromoof nan yaada jedhu nagana akka kabajamuuf waamicha dabarsuu qaba jedhan.
Rakkoon bara 2016 Irreecha Malkaa Harsadiirratti uumame akka hin deebineef hunduu itti-gaafatamummaa guddaa qaba jedhan.
Qaamoleen gamaa gamanaa Irreecharratti mormii waamanis akka irraa of-qusatan dhaaman.
Dhaabbati kamiyyu gabaasa baaseef osoo hin taane mootummaan dirqama waan qabuuf nageenya ni eegsisa kan jedhan Obbo Kabbadaan, qaamoleen mootummaa Federaalaa hanga naannootti waliin qindaa’anii koreen dhabbatee iddoo hundatti, Oromiyaa guutuutti hojjechaa jiru jedhan.
Irreechi ayyaana guddaa waggaa waggaan Oromoon miliyoonotaan irratti hirmaatan ta'uu kan ibse HRW, kan bara kanaa kun garuu muddamniifi tasgabbii dhabuun yeroo Oromiyaa keessatti cimaa jirutti gaggeeffamuuf jira jedheera.
Waxabajji 29 Artist Haacaaluu Hundeessaan ajjeefamuu hordofee hokkara uumameen, namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu, qabeenyi guddaanis manca’uu, akkasumas namoonni qe’eerraa buqqa’uu kan eere dhaabbati, namoonni ajjeefamanis gariin humnoota nageenyaan, kaan ammoo namoota sivilii yakka keessatti hirmaataniin ta'uus ibseera HRW.
Kanaan walqabatee mootummaan namoota siyaasaa bebbeekamoo hokkara uumame keessatti hirmaataniiru jechuun himatu dabalatee kumaatamaan namoota hidheera akka dhaabbati kun jedhutti.
Taatee bara 2016 Malkaa Harsadiitti mudatee lubbuu namoota hedduu galaafate kan eere HRW, sanarraa eegalee haga ammaatti Irreehi iddoo ilaachi siyaasaa itti calaqqisu ta’eera jedhe.
Mootummaan sodaa weerara koronaavaayirasiif jecha akkuma ayyaanota kaan irratti uummanni akka hin heddummaanne dhorke Irreecharrattis murtee walfakkaataa dabarsuun waan daba qabu miti.
Garuu haala amma jiruun uummanni heddumminaan Irreecha baranaarratti argamuunsaa waan hin oolledha jedha HRW.
Uummannis mufiifi komii yeroo ammaa qaburraa kan ka’e mormii dhageessifachuu waan danda’uuf wayita kana mootummaan tasgabbaa’uu qaba jedheera HRW.
Mootummaan taatee bara 2016 raawwaterraa baratee qaamoleen nageenyaa akka obsaniifi of-qusatan akkasumas uummanni bilisaan ayyaanasaa akka kabajatu gochuu qabas jedheera HRW.
Shamarreen waa'ee Irreechaa kitaaba barreessite maal jettii?
Oromoo: 'Waaqeffannaan du'aa ka'uu fi du'a booda lubbuun jiraachuutti hin amanu'
30 Fuulbaana 2020
Irreecha Oromoo: 'Lakkofsa irreeffattootaa daangessuun Oromoo malkaarraa ugguruun safuudha'
Viidiyoo, Kitaabni Irreechaarratti barreeffamee badhaasaaf kaadhimame maal of keessaa qaba?, Turtii 3,56
29 Fuulbaana 2020